ब्रेकफास्ट तयार गर्नुहोस् 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
अघिल्लो खेल: हाम्रो बीचमा क्र्यास
हाम्रो बीचमा क्र्यास हामी बीच क्र्याश एक एकदम चाखलाग्दो खेल खेल हो। [...] को अभावका कारण
अर्को खेल: मेरो पिज्जा आउटलेट
मेरो पिज्जा आउटलेट मेरो पिज्जा आउटलेट गेम आदर्श फास्ट फूड कुकि cooking खेल हो जुन तपाईं सक्नुहुन्छ [...]
के तपाइँ खाना पकाउन चाहानुहुन्छ? के तपाईं पश्चिमी खानाको मास्टर बन्न चाहनुहुन्छ? बिहानको खाजा तयार गर्नु भनेको पकाउने सिमुलेशन होइन, तर एक आर्केड खेल हो जसले थ्रीडी आर्ट एनिमेसनको साथ मौसममा थप गर्दछ। तपाईको मिशन भनेको खाजामा प्रत्येक खानाको लागि पर्याप्त मौंसिंग थपेर तयारी गर्नु हो। यदि तपाईं केवल एक तारा पूरा गर्नुभयो भने, तपाईंलाई अर्को तहमा जानको लागि पनि अनुमति दिइन्छ। यदि तपाईंलाई यो खेल मनपर्दछ भने, यो आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्न नबिर्सनुहोस्।
# आर्केड# भान्छा3DComidaफलफूलकौशलमोबाइलबच्चाबच्चाहरुप्यास्टेल